खाली पेट चिया फाईदा भन्दा धेरै छन् बेफाईदा – Janamukhi.com
खाली पेट चिया फाईदा भन्दा धेरै छन् बेफाईदा
कार्तिक ०६ , सावधान ! खाली पेटमा चिया पिउने गर्नुभएको त छैन । घरमा आएका पाहुनाको सत्कारका लागी होस् वा साथिभाई भेटभाट हुदा गफसंगै धेरै नेपाली चियाको चुसिक लिने गर्दछन् । अझ अधिकाशं नेपालीको दैनिकी त चियाबाट नै सुरु हुन्छ । नेपालीका लागी चिया एक संस्कृति नै बनिसकेको छ ।
तर चियाको अत्यधिक सेवन स्वास्थ्यका लागी भने हानिकारक हुनसक्छ । साथै खाली पेट चिया पिउने ब्यक्तिलाई यसले शरीरमा गम्भीर असर समेत र्पुयाउन सक्छ । चिया सेवन गर्दा हुने हानि निम्न छन् :
१. दुध चियाले असर नगर्ने कतिपयको ठम्याई रहने गरेको छ । तर खालिपेटमा दुध चियाको सेवनले शरीरमा असर पुर्याउने गर्दछ । खाली पेट दूधचिया पिएमा दिनभर शरीरमा थकान हुने तथा मुख अमिलो हुन्छ । जसले कालान्तरमा पेटको समस्या निम्त्याउने गर्दछ ।
२. केहि मानिस दूधचियाले असर गर्ने भन्दै कालो चिया सेवन गर्दछन् । तर कालो चियामा हुने पत्तिको मात्राले पाचन प्रणाली सहित पेटमा असर पार्ने गर्दछ । त्यसैले चिया सेवन गर्नुभन्दा पहिले अनिवार्य रुपमा केहि गिलास पानि पिउनु उत्तम हुन्छ ।
३. चियामा हुने टेनिनले शरीरमा भएको आइरनसंग रियाक्ट गर्छ । जसले खानापछि चिया पिउने मानिसको शरीरमा भएको पोषण तत्वलाई नष्ट पार्ने गर्दछ । तसर्थ खाना खाएपछि चिया पिउने बानि छ भने यसलाई आजैबाट त्याग्नु होस् ।
४. केहि मानिस दैनिक अत्यधिक चियाको सेवन गर्दछन् । दैनिक ४ कपभन्दा बढि चिया पिउने मानिसमा घाटिको क्यान्सरको खतरा हुने गर्दछ । तसर्थ अत्यधिक चिया सेवन गर्ने बानि हुनेले चियाको मात्रा बिस्तारै घटाउदै लानुपर्छ । अन्यथा यसले शरीरमा रोग भित्रने गर्दछ ।
५. चियाको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको चियाले एसिडको मात्रा बढाउने गर्दछ । लगातार चिया सेवन गर्ने मानिसको शरीरमा ग्यास्ट्रिक तथा अल्सरको समस्या देखापर्ने हुन्छ । तसर्थ अत्यधिक चियाको सेवन गर्नु निकै घातक मानिन्छ ।
टी-ट्वान्टी वरियतामा नेपाल यथावत
मान्छेलाई जिउँदै जलाउने, महिलामाथि झम्टिने अपराधीलाई क्षमा हुन्न : मन्त्री बाँस्कोटा